FDA oo la ansixiyay Lorcaserin HCL loogu talagalay Daaweynta Caanaha
1. FDA Lagu aqoonsaday daroogada miisaaniyadda: Lorcaserin HCL
2. Guudmarka Quick ee Lorcaserin (846589-98-8)
3. Lorcaserin Mashruuca Waxqabadka
4. Sida loo qaado Lorcaserin
5. Qiyaasta la tirtiray
6. Xaddiga xad-dhaafka ah
7. Tilmaamo dheeraad ah-Isku xiran Marka Lorcaserin
8. Saameynta daaweynta ee Lorcaserin
9. Kaydinta Lorcaserin
10. Nadiifinta Qaadashada Lorcaserin
11. Lorcaserin ayaa ka soo jeeda Obeses
12. Supplement Lorcaserin
13. Iibsiga Lorcaserin HCL Online
14. Soo-koobida On Lorcaserin HCL (Belviq)
FDA Lagu aqoonsaday daroogada miisaaniyadda: Lorcaserin HCL
Miyaad raadineysaa hab ammaan ah oo luminta miisaanka jirka iyada oo aan la daboolin fuuq-baxa ku saabsan maadooyinka adag iyo kuwa aan dhammays-tirnayn? Isku day lorcaserin daroogada miisaanka. Ogoow sida ay waxtarka u leeyahay taageerada ay tahay, lorcaserin ficilka, iyo sababta ay ugu guulaysatay ogolaanshaha FDA.
Ilaa hadda, ku saabsan 31% dadka Maraykanka ah waa mid cayilan ama cayilan. Xogta dheeraadka ah waxay xaqiijineysaa in 69% dadka waaweyn ee ka weyn sanadka 20 ay yihiin cayil ama cayil. Taas macnaheedu waa in qof kasta oo 10 ah oo ku jira qaan-gooyadan da'da ah, waxaad u eegi kartaa dhibbanayaasha 6. Ku saabsan 30 boqolkiiba ardayda dugsiyada sare waa cayil ama cayil.
Habka kaliya ee saxda ah ee wax looga qaban lahaa cayilku waa iyada oo loo marayo jimicsi joogto ah, qorshaha cuntada, qalliinka qalliinka caloosha, ama isticmaalka daroogo lumis ah. Inkasta oo kiniiniga ka lumay kiniinku si fiican u shaqeeynaya isagoo daadinaya dhowr rodol oo yar, waxay la xiriiraan dhaawaca wadnaha ee wadnaha. Ka sokow, waxaa jiray dhowr arrimood oo ku saabsan fursadaha caafimaadka maskaxda.
Ilaa 2012, supplement lorcaserin, oo sidoo kale loo yaqaanno Belviq, weligeed ma ahayn kiniin loo qoro miisaanka khasaare sababtoo ah sababaha caafimaad ee aan la xaqiijin. Laakiin ka dib, cilmi baaris Maraykan ah ayaa lagu sameeyay dhowr qof oo kaniiniga kiciyay si ay u noqdaan kuwo ammaan ah oo hufan iyada oo aan wax khatar ah u keenin caafimaadka wadnaha. Kuwa isticmaalaya waxay lumin karaan celcelis ahaan 5-10% miisaankooda jirkooda, iyada oo shardi ah in ay ku lug yeeshaan dhaqdhaqaaqa jireed iyo cunto yar-yar.
Cayilka iyo cayilka badan
Sidaas, waa maxay farqiga u dhexeeya cayilka iyo cayilku? Haddii miisaanka culeyska jirka ee jirka (BMI) uu dhaafo 30kg / m2, ka dibna waxaad tahay cayil. Haddii qiimaha u dhaxeeyo 25 iyo 29.9kg / m2, taas oo ah miisaan weyn. Sidee Loogu Dhaawacmaa Heflin HCL?
Sababta asaasiga ah ee buurnaanta ma aha mid cad laakiin sababa dib u dhac ku saabsan hiddaha, metaboliga, physiological, iyo arrimaha dabeecadda. Xaaladda adag ee xaaladdan waxay keenaysaa sonkorowga mellitus, cudurada wadnaha, hyperlipidemia, apnea, cudurada beerka dufan, dhiig-karka, iyo kansarrada qaarkood.
Daraasada Mareykanka ayaa soo saartay Badbaadinta Wadnaha ee Lorcaserin
FDA ma ogolaanin isticmaalka lorcaserin supplement sababtoo ah baahida dadwaynaha ama wax ku oolnimada ee xakamaynta cayilka. Qodobka ugu muhiimsan ee horseeday ansixintiisa waa daraasadda weyn ee Mareykanka ee lagu sameeyay sannadihii 3.3.
Marka loo eego daraasad lagu soo bandhigay Wargeyska New England Journal of Medicine, lorcaserin wuxuu caddeeyaa inuu yahay daroogada lagu kalsoonaan karo maareynta miisaanka loogu talagalay dadka buka iyo cayilkaba.
Cilmi-baareyaasha ayaa si aan kala sooc lahayn u dooranay bukaannada 12000 ee aan ahayn kaliya miisaanka culus, laakiin sidoo kale dhibanayaasha xaaladaha wadnaha ee kala duwan. Laga soo bilaabo kooxdan, qaar ka mid ah dadka ayaa loo xilsaaray inay helaan maalin kasta lorcaserin qiyaasta halka inta kale ay qaateen placebo.
Sanad ka dib, 39% bukaanka la siiyay lorcaserin iyo 17% ee kuwa ka tirsan kooxda xuubka waxaa lagu diiwaangeliyey ugu yaraan 5% miisaan lumis. Inkastoo aysan taasi ku filnayn, kooxda lorcaserin waxay halis ugu jirtaa inay qaaddo cudurka macaanka inkastoo qaar ka mid ah jimicsiyada ay ku dhammaan doonaan halista hypoglycemia.
Marka la isbarbardhigay ka qaybgalayaashii qaadey lorcaserin iyo kuwa ku yaala xuddunta, ma jirin wax diiwaan ah oo ku saabsan arimaha kordhinta wadnaha ee labada kooxba. Kaliya lorcaserin wuxuu xoojiyaa miisaanka lumista marka loo eego habab kale.
Lorcaserin iyo Cudurka Wadnaha Wadnaha
Sidaa darteed, maxay dadku u iibsadaan fikradda ah in lorcaserin uu ku xiran yahay dhaawac xagga wadnaha ah? Aan sharaxo ...
Waxaa jira 14 noocyada kala duwan ee 5-HT soo dhaweeyayaasha habka aadanaha. Ahaanshaha serotonin 2C agonist, lorcaserin bartilmaameedsan 5-HT2C soo dhaweeyayaasha nidaamka dhexe ee neerfayaasha. Laakiin markaa, dib udhexaadiyahan ayaa isku xira 5-HT2B iyo 5-HT2A soo dhaweeyayaasha.
Tani waa in la yidhaahdo, haddii 5-HT2C waa la kicin karaa, kuwa kale ee soo dhaweeyayaashu waxay leeyihiin fursad siman oo lagu dhaqaajin karo. Tani waxay aad u badan tahay daawooyinka miisaanka miisaanka culus ee serotonin, taas awgeed, dhibaatada wadnaha wadnaha iyo sambabada sare ee dadka isticmaala.
Xaaladdan, tixgelinta lorcaserin ee 5-HT2C waa 100x ka weyn tahay 5-HT2B soo dhaweeyayaasha. Qiyaasta maalinlaha ah waxay mas'uul ka tahay xasilinta waxqabadka. Haddii aad xad gudubto, waxaad ka badnaan doontaa xaddiga waxaana qaddarka dheeraadka ah uu ku xirnaan doonaa inta soo hartay. Halkaas oo ah hawlgalka 5-HT2B wuxuu keenaa cudurada wadnaha ee wadnaha, kicinta xNUMX-HT2A waxay keentaa is bedelka niyadda, dareemida 'sare', dabaaldega, iyo muuqaalka muuqaalka.
Hadda, lorcaserin daroogada miisaanka waa daaweynta kaliya ee kicinaysa 5-HT2B iyada oo aan wax khatar gelin wadno-xanuun ama dhiig-karka.
Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA) ayaa marka hore oggolaatay daawada Belviq in bukaanno qaangaar ah oo Maraykanka ah 2012. Ogolaanshahan wuxuu dhacay saddex sano ka dib markii daawooyinka Arena iyo Eisai Inc. ay soo gudbiyeen NDA (Arjiga Cusub) ee Lorcaserin. Waxay qaadatay FDA laba sanno si ay u tiriso xogta, oo ay ku jirto daraasaddaha kiisaska ee kiisaska la xidhiidha lorcaserin, ka hor inta aan la siin go'aanka kama dambaysta ah.
Ilaa labaatankii sano ee la soo dhaafay, Belviq waxay u taagan tahay inay noqoto kiniibkii ugu yaraa ee lagu riixo si uu ugu guulaysto ogolaanshaha FDA. Inkastoo ay tahay daawada dhakhtar qora ee ruqsada haysta ee Maraykanka, haddana weli lama aqbalin Yurub.
Guudmarka deg-dega ee Lorcaserin (846589-98-8)
Lorcaserin hydrochloride waa qalab cayriin oo ka tirsan fasalka serotonin agonists. Waa bir kiimiko leh CAS 846589-98-8
Aan ku daalno sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan kiimikadaan ...
Magaca kiimikada (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
CAS maya. 846589-98-8
Xaaladda dhibicda (° C) 193 - 200
miisaanka kelli 232.15
Xalka (25 ° C) • Biyaha
heerkulka kaydinta -20 (° C)
isticmaalka Maareynta miisaanka dadka waaweyn
Isku mid ahaanshaha · APD-356
Ogsoonow in lorcaserin hydrochloride ay tahay aalad daroogo ah. In kastoo si fudud loo heli karo dukaamada kiimikada badankood, waa in si adag loo isticmaalo cilmi baaris shaybaar, horumarin, iyo ujeedooyin helitaanka daroogada. Maaha isticmaalka aadanaha, sidaas darteed, uma qalmaan in lagu iibiyo bukaanada.
Lorcaserin HCL Xaashida Xogta Badbaadada
Iyadoo la raacayo nidaamka GHS-da ee kala-soocida, lorcaserin hydrochloride waa qaybta IV-naadinta. Waxay ku dhejisaa xeerarka; H302, P264, P301, P312, iyo P330. Waxay noqon kartaa sun ku ah wax liqid, neefsasho, cunid, ama taabasho toos ah leh maqaarka.
Qiyaasaha Gargaarka Degdega ah
Haddii ay dhacdo in lorcaserin laqaado, ku dhaq dharka dhibbanaha oo biyo badan oo nadiif ah. Ku sii wad inaad ku tirtirto daqiiqadaha 15 ee xiga, iyada oo shardi ah in qofka uu miyir qabo. Ha isku dayin inaad bixiso maamul afka ah haddii qofku miyir qabo.
Haddii uu dhaco maqaarka maqaarka, ku dhaq biyo badan oo biyo nadiif ah iyo saabuun khafiif ah. Haddii isha lagu hayo, isticmaal biyo yar oo biyo ah si aad u tirtirto daqiiqado 15. Badanaa shaybaarada si fiican u qalabaysan waxay ku rakiban yihiin kuwa badbaadada iyo indhashare u sahlan marka ay qabanayaan jawaab celin deg-deg ah.
Haddii ay dhacdo in dhibanuhu ku neefsado lorcaserin HCL, u wareeji qol leh hawo cusub. Haddii neefsashadu noqoto mid adag, isticmaal neefsasho macmal ah oo raadso gargaar caafimaad.
Xiro maro shaybaarka, muraayadaha ammaanka, iyo galoofyada kiimikada u adkaysta. Sidoo kale, isticmaal neefsasho, kaas oo lagu aqoonsaday NIOSH.
Ha ka neefsanin, qiiqa, boodhka, buufin, ama walax kasta oo hawada ku jira shaybaarka. Xakamee wakhtiga soo-gaadhista sida ugu macquulsan. Inta lagu jiro kaydinta, hubi inaad lorcaserin ku kaydiso weel daboolan oo si ammaan ah uga fog kuwa isticmaalayaasha sheybaarka kale.
Lorcaserin waa deganaansho xaaladaha caadiga ah iyo kontoroolka. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ka fogaataa oxidants xoog leh maaddaama ay dhalin karto burburka alaabta. Waxyaabaha ka soo baxa waa oxides of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, iyo chloride hydrogen.
Lorcaserin Mashruuca Waxqabadka
Lorcaserin waa serotonin 2C agonist. Daroogadu waxay leedahay jacayl badan oo loogu talagalay dadka 5-HT2C. Waxay bartilmaameed kiimikooyinka gaarka ah ee hypothalamus, kuwaas oo ka masuul ah cuntada.
Ii ogolow inaan sharaxaad ka bixiyo caqli-celinta ... Belviq wuxuu la falgalaa Nidaamka Nervous Central (CNS), gaar ahaan hypothalamus. Daroogada ayaa bartilmaameedsanaya 5-HT2C duubayaasha, kuwaas oo laga helayo pro-opiomelanocortin neurons gudaha gudaha nukleus. Tallaabadani waxay sheegaysaa sii deynta alfa-MSH, taas oo hormoonka ku shaqeysa melanocortin-4-reseptors si loo xakameeyo rabitaanka cuntada. Qeybtan maskaxda ayaa nidaamisa gaajada sida markaa firfircooni, waxay u muuqan doontaa jirka in aad inta badan ka badan tahay.
Marka la qaado, daroogada ayaa hoos u dhigta isticmaalka cuntada waxayna keenaysaa dareenka satisida. Inkastoo aad weli ku sii deyn doonto cunto caafimaad leh kaloori caafimaad leh, Belviq ayaa xakameyn doona xajintaada. Waxaad horayba u buuxsami doontaa marka aad cunto yareyso. Hagaha Lacagta Ipamorelin iyo Isticmaalka Ipamorelin
Ahaanshaha xanuunka-xakameyn, daweyntu waxay u sahlaysaa miisaanka luminta bukaanka iyo bukaanka culus. Ka sokow, waxay caawisaa maareynta xaaladaha miisaanka la xiriira sida cadaadis dhiig oo sarreeya, cudurka wadnaha, iyo sonkorowga nooca II.
Daawadani waa mid waxtar leh, mid waa inuu ku daraa waxqabadyo jireed iyo qorshe cunto caafimaad leh oo caadi ah. Ma jiro cunto caafimaad oo gaar ah oo la raaco, laakiin waxay ku xiran tahay kalooriyeyaasha hooseeya waxay faa'iido u yeelan karaan. Haddii aad si joogto ah u maamulayso lorcaserin sanadka oo idil, waxaad lumin doontaa celcelis ahaan 3.5% miisaankaaga hore ee jirka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kiisas dhif ah oo daroogada aysan saameyn ku yeelan karin. Tusaale ahaan, waxaad si daacad ah u isticmaali kartaa daroogada muddo ku dhow saddex bilood, laakiin ma jiraan isbeddelo muuqda oo jirkaaga ku jira. Waa hagaag, tani waa meesha ay tahay in aad joojiso daaweynta oo aad iska badbaadiso niyadjab dheeraad ah. Haddii aanad lumin karin qadar macquul ah usbuucii 12aad, ma jirto wax rajo ah in laga faa'iidaysto daroogada.
Sida loo qaado Lorcaserin
Marka la eego shuruudaha FDA, lorcaserin waa in ay qaataan oo kaliya dadka qaangaarka ah ee leh qiyaasta jirka jirka (BMI) ee 30kg / m2 iyo kor. Haddii aad qabtid miisaanka la xidhiidha miisaanka nooca 2aad ee diabeteska, dhiig karka, ama cudurka wadnaha, waxaad weli xaq u leedahay inaad isticmaasho daroogada shuruudaha BMI-gaaga ugu yaraan 27kg / m2.
Macluumaadka Dawada ee Belviq
Bukaanku waa inuu si sax ah u qaataa hal xabbo oo ah 10mg kiniin ahaan laba jeer maalintii sida uu u tilmaamayo tilmaamaha dhakhtarka. Fikrad ahaan, waa inaad maamuustaa daawada waqtiyada ku haboon. Kiniiniga oo dhan ha liqo adiga oo aan cunin ama burburin. Waxaad qaadan kartaa qiyaasta lorcaserin la'aanta cuntada ama iyada oo aan ku xirnayn doorashadaada ama talo bixinta dhakhtarku.
Haddii aadan helin tilmaamo ku filan dhakhtarkaaga, marwalba waad xaqiijin kartaa warqadda daawada. Marnaba ha qaadin xaddi badan ama wax ka yar wixii laguu qorey maadaama aad faragelin kartid natiijooyinka.
Waxaa lagu talinayaa in la qaato Belviq inta lagu guda jiro noloshooda si loo wajaho qaar ka mid ah cudurrada miisaanka la xiriira. Haddii aanad ku talin dhakhtarkaaga, waa inaadan waligaa joojin lorcaserin qiyaasta.
Qiyaasta la tirtiray
Miyaad seegtay qaddar go'an? Kaliya isla markiiba ka dib markaad fikirkan ku dhufato. Si kastaba ha noqotee, marka ay tahay waqtigii loogu talagalay qiyaasta soo socota, kaliya sii wad jadwalkaaga joogtada ah oo iska ilow qiyaasta daawada la seegay.
Haddii aad isku nadiifisid wax ka badan kiniin Belviq ah, waxaad u badan tahay inaad la kulanto calaamado halis ah iyo waxyeelooyin soo socda. Haddii ay dhacdo in ka badan xadiga, u leexi xariiqa xarunta xakameynta sunta isla markiiba ka hor intaan daroogadu bilaabin waxtarkaaga. Nambarka khadka caawinta waa 1-800-222-1222.
Qaar ka mid ah astaamaha waxaa ka mid ah isbedelka niyadda, dawakhaad, lallabbo, dareemid xanuun, calool xanuun, madax xanuun, ama muuqaal. Xaaladaha khatarta ah sida suuxdinta, dhibaatooyinka neefsashada ama burburaya, wac 911 adeega gurmadka. Waa maxay sababta ay Sibutramine ugu caansan tahay miisaanka lumay?
Waxaa jira xaalado yar oo lorcaserin la isticmaali karo. Qadar sarreeya ayaa sababi kara isticmaalaha inuu dareemo "mid sare" oo uu dhalaalaya muuqaal-muuqaal. Waa caado-samaynta, sidaas awgeed waxay u badan tahay in ay sababto ku-tiirsanaanta daroogada. Tani waxay sababtay, Maamulka Maamulka Isku-dhafka ayaa ku qeexay sida sheyga IV-da.
Taxadar Gaar ah Marka la saaro daawada Lorcaserin Miisaanka luminta
Ka hor intaadan qaadin Lorcaserin (Belviq)
Xasaasiyada Aasaasiga ah
U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad xasaasiyad u leedahay daawooyinka. Iyada oo laga caawinayo farmashiistaha, ka soo qaado buug-tilmaameedka haddii maaddooyinka lorcaserin ay kicin karaan falceliska xasaasiyadda.
Haddii aad ku jirtid daaweyn kale oo ay ka mid yihiin, dawooyinka rijeetada, daawooyinka laguu qoro, ama alaabta dhirta, hubi inaad wargeliso farmashiistaha. Tani waa mid muhiim ah maadaama ay ka caawiso abuuritaanka fursadaha daroogooyinka iyo daroogada daroogada iyo sida ay u saameeyaan farmasaha dhirta ee lorcaserin ee jirka. Natiijada, dhakhtarku waxaa laga yaabaa inuu ku qasbo inuu ku hagaajiyo xaddiga daawada kaadi-macaan ee sonkorta leh isla markaana ilaali daawashada dhaw ee saameynta daawada.
Farmashiyan, isdhexgalka daroogada ee Belviq iyo dawooyin kale ayaa noqon kara nolol khatar ah. Tusaalooyinka caadiga ah waa daawooyin loo qoro hoomada, niyadjab, qabow, ama jirrooyinka maskaxda. Halkan waa liis dhamaystiran oo ah daawooyinka iyo maaddooyinka daroogada si ay u dhigaan sawirka;
Tricyclic antidepressants (TCAs) sida nortriptyline, trimipramine, protriptyline, amitriptyline, doxepin, clomipramine, amoxapine, ama imipramine
Xakamaynta serotonin ee xakameynaya (SSRIs) sida fluoxetine (Sarafem), sertraline, paroxetine (Paxil), escitalopram, citalopram, iyo fluvoxamine
Dextromethorphan (caadi ahaan daawooyinka qabow)
Nadaafad-celiyeyaasha xasaasiyadda ee norepinephrine (SNRIs) oo ay ku jiraan venlafaxine (Effexor) iyo duloxetine
Kaadi-oogayaasha (Monoine oxidase) (MAOIs) sida linezolid, tranylcypromine, methylene blue, isocarboxazid, selegiline, iyo phenelzine
Daawooyinka miisaanka-luminta sida St. John's jort iyo tryptophan
Daaweynta cillad la'aanta
Daawooyinka sonkorowga sida daawada insulin
Ogsoonow in lorcaserin uu keeno miisaan lumis ah bukaansocodka. Haddii aad qabto cudurka macaanka nooca II, waxaad ku jirtaa maqnaashaha sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda inta aad qaadanayso kiniinka. Sidaa darteed, waa inaad si joogto ah ula socotaa heerarka sonkorta dhiiggaaga iyo inaad la xiriirto dhakhtarkaaga haddii ay jirto baahi loo qabo in la beddelo qiyaasta.
Daaweynta cudurka dhimirka
Dawooyinka loo isticmaalo madax xanuunka dhanjafka ah sida zolmitriptan, sumatriptan, rizatriptan, frovatriptan, almotriptan, naratriptan, iyo eletriptan (Relpax)
Koodhin (oo laga heli karo daawooyinka qufaca iyo xanuunka)
Waxyaabaha kale ee miisaanka lumay
U ogolow farmashiistaha in uu ogaado wax kasta oo nafaqo ah, geedo yaryar ama alaab culus oo aad qaadatid.
Uurka iyo kalkaalisada
Lorcaserin wuxuu u muuqdaa inuu yahay cadawga weyn ee hooyada. Kiniiniga xajinta ayaa adiga kuu ah haddii aad horay uur leedahay ama aad qorsheyneysid inaad uur qaaddo wax degdeg ah. Daawadani waxay u badan tahay inay waxyeelo uurjiifkaaga u horseedi karto isbedelka uur-jiifka. Markaad ogaato inaad uur leedahay adigoo qaadanaya qiyaasta daawada, dhakhtarkaaga isla markiiba wac talobixin.
Marka, sababta dhabta ah waa Belviq ka hortaga uurka? Sababtoo ah miisaan lumisku waa waqti qashin ah marka uurka. Waxa intaa ka badan, daraasad lagu sameeyay jiirka ayaa shaaca ka qaaday in caruurtu ay ku dhamaanayaan miisaanka jidhka oo hooseeya noloshooda oo dhan.
Sidoo kale laguma talin karo inaad naas-nuujiso inta aad ku jirto lorcaserin. Inkasta oo aysan jirin warbixino lagu kalsoon yahay oo lagu sharxayo sida daroogadu u dhaafi karto caanaha naaska, oo waxyeello u geysan karta ilmaha, waxa fiican in laga badbadiyo intii ka dambaysay.
Xaaladaha unugyada wadnaha iyo dhiigga
Haddii ay dhacdo inaad qabto dhibaatooyin xagga wadnaha ah iyo arrimaha caafimaadka ee la xidhiidha unugyada dhiigga, hubi inaad u sheegto dhakhtarkaaga. Kuwaas waxaa ka mid ah;
Leukemia (oo saameeya unugyada dhiigga cad)
Meelo badan (ee unugyada plasma)
Dhiig karka uurjiifka (saameyn ku yeesha qaabka unugyada dhiigga cas)
Xayawaanka deenishku (Peyronie's disease, angulation, ama fayruska cavernosal)
Markaad qaadaneysid Lorcaserin
Iska yaree kalooriyadaada cuntadaada iyo samee dadaal ah jimicsi joogto ah. Adigoo sidaas samaynaya, wuxuu sare u qaadayaa caafimaadkaaga wuxuuna dardar-galiyaa geedi-socodka baruurta. Lorcaserin wuxuu si fiican u shaqeeyaa dhaqdhaqaaqa jirka.
La soco sonkorta dhiigaaga
Haddii aad qabto sonkorowga nooca II, saameynta culeyska miisaanka lorcaserin wuxuu keeni karaa heerarka sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda. Had iyo jeer la wadaagto warbixintaada dhakhtarka kuu qori doona isla markaana ku hagaajin doona qiyaasta.
La soco ballamaha dhakhtarkaaga
Ugu yaraan, dhakhtarku wuxuu hubin doonaa horumarkaaga daroogada, sida habka ugu habboon ee nidaamkaagu yahay, iyo sidoo kale kugula talin doona.
Tilmaamo dheeraad ah-Isku xiran Marka Lorcaserin
Kiniin kiniiniga lorcaserin oo dhan laakiin ha calalin, kala qaybin, ama jebin
Ha kordhin qiyaasta. Belviq, laba jeer kiniin maalin kaste qaado, laakiin Belviq XR, hal kaniini ayaa ku filan maalintii hal mar.
U hubso inaad u sheegto farmashiiyahaaga daawo kasta, daawooyinka, ama alaabooyinka aad qaadanayso kahor ama inta aad ku jirto Belviq
Jooji isticmaalka lorcaserin haddii aadan gaarin ugu yaraan 5% miisaanka lumitaanka ka dib isbuucyada 12
Iska ilaali mashiinka khatarta ah ama baabuur wadista, maadaama daawadu ay faragelin karto diiradaada, xusuusta, iyo awoodda aad u leedahay in aad fiiriso. Kaliya sidaas yeel haddii aad ku qanacsan tahay in lorcaserin uusan saameyn ku yeelan gobolkaaga maskaxda
Ha qaadan daawada haddii aad uur leedahay
Fahmidda khatarta lorcaserin ee qaadashada, saameynteeda dhinaca xun, falcelinta nolosha khatarta ah, iyo faa'iidooyinka. Haddii ay calaamaduhu noqdaan kuwo daran, raadso daaweyn
Dhamaantoodna, iska ilaali inta aad naaska nuujineyso
ha isticmaal lorcaserinin Isku daridda daawooyinka serotonergic, dopamine antagonists, ama cunto kale oo dheellitiran sida tryptophan. Iskaashiga u dhexeeya daawooyinkan waxay u badan tahay inay keenaan cudurka serotonin syndrome ama calaamado la mid ah cilladda neuroleptic malignant syndrome (NMS).
Haddii aad qabtid dhibaatooyin wadnaha oo hooseeya, kala hadal dhakhtarkaaga isla markaa ka hor inta aadan qaadan miisaanka luminta lafdhabarka
Daawadan waxaa lagu talinayaa in bukaanada cayilan iyo dadka cayilan ay ku jiraan BMI ugu yaraan 27kg / m2iyo miisaan culus oo la xiriira.
Ha qaadan lorcaserin haddii aad tahay cillad laakiin weli da 'yar oo ka hooseeya 18 sano
Ha la wadaagin kiniinkan qof kale
Dacwooyinka Xeeladaha iyo Lorcaserin Contraindications
U qaado lorcaserin khatartaada ama ugu sarreyn markaad haysato shuruudaha soo socda;
Kala-duwanaanshaha kelyaha daran
Cilad-darrada maaddooyinka lorcaserin
Taariikhda bradycardia (garaaca wadnaha oo hooseeya ee <50BPM)
Goorta la joojiyo qaadashada lorcaserin;
Haddii ay dhacdo inaad sameysid calaamadaha cudurada wadnaha wadnaha iyo wadnaha oo xirma wadnaha
Dareen-celinnada xun iyo calaamadaha daran
Haddii daaweyntu aysan dhammaaneyn, sida inaadan arag wax isbedel ah afar bilood ka dib
Marka dhakhtarkaagu kugula taliyo inaad joojiso
Daroogada ayaa saameynaya tirinta dhiiggaaga oo ay ku jiraan unugyada dhiiga cad, lökosit, lymphocytes, iyo neutrocytes
Dabeecadaha isdilka ah ee isdilka ah, fikirka, ama ficilada
Haddii ay dhacdo xad dhaaf ah
Saameynta daaweynta Lorcaserin
Sida daroogooyinka intooda ugu badan, lorcaserin waxay u badan tahay inay keento saameynaha. Si kastaba ha noqotee, calaamadaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo ku meelgaar ah, wayna baabi'i doonaan marka jirkaaga uu daaweynayo daroogada. Haddii ay dhacdo saameyn sideed ah, la xiriir farmashiyaha isla markiiba.
Astaamaha Caadiga ah ee yar yar
Kaadi, xanuun, ama kaadida adag
Xanuunka hurdada sida dhibaatooyinka hoos u dhaca ama jiifsanaya
Daal ama daal
Xaalado dhif ah, dhibaatooyinka soo raaca waxay noqon karaan kuwo aad u daran, markaa, iyaga oo ku baaqaya daryeel caafimaad oo degdeg ah. Waxay ka mid yihiin;
Maqalka (arag ama maqal wax aan jirin)
Isbeddel niyadda ah
Murqaha muruqyada, qallafsanaan, ama xajin
Amnesia (luminta khasaaraha ku meelgaarka ah)
Fikirka isdilka iyo isku dayga
Gacmaha, lugaha, cagaha, ama gacmaha oo barara
Wadne garaac aan joogto ahayn (dhakhso ah ama gaabis ah)
Dhibaatooyinka isku xirka
Dareemida kala maqnaanshaha (inaad ka baxsan jirkaaga)
Kordhinta naasuhu gaar ahaan ragga
Dheecaan ka sameysan naaska oo ay sabab u tahay kor u qaadista prolactin
Baxnaanshaha (xoqitaan dheer iyo xanuun leh oo soconaya wax ka badan lix saacadood)
Inkastoo aan isku daynay inaanu daboolno dhammaan calaamadaha suurtagalka ah iyo waxyeelada daawada lorcaserin, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto wax aan ahayn liiska kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay dhacdaa oo kaliya dhacdada khaas ah.
Xaaladaha xad-dhaafka ah, hubi inaad soo sheegto saameynaha Barnaamijka warbixinta ee FDA. Khadka taleefankoodu waa 1-800-332-1088.
Ku kaydi daawadan ku jirta caag si adag u xiran, marka la doorbidayo weel uu soo galo. Ka fogow qoyaanka iyo kulaylka xad-dhaafka ah. Inkastoo aysan jirin heerkulka kaydinta gaarka ah, qiimaha kasta ee ku jira xaaladaha caadiga ah waa mid la aqbali karo. 25 ° C waa mid aad u fiican, laakiin noocyo 15 - 30 ° C wali waa sax.
Xakamee lorcaserin daroogada miisaanka miisaanka meel ammaan ah si looga hortago isticmaalka dadka aan fasaxnayn. Iska fiirso in daaweyntu tahay walax kantaroolan waxaana laga yaabaa in lagu xadgudbo. Ka sokow, waxay noqon kartaa sun u ah carruurta ama qof kasta oo qaadanaya iyada oo aan dhakhtar qorin.
Nadiifinta Qaadashada Lorcaserin
Ka saar lorcaserin sidii qashin daawo ah sida waafaqsan FDA, EPA, iyo xeerarka DEA. Ha ku maydhin musqusha, u ogolow inay ku dul socoto biyaha biyaha, ama ku tuur qashinka. Markaad biyaha ku dhalaaleyso, lorcaserin waxay keeni kartaa wasakheynta.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo looga takhalusi karo daroogada. Marka aad calaamadiso oo aad si taxadar leh u xirato daawada, waxaad isticmaali kartaa barnaamij daawo qaadasho, taas oo ku lug leh soo-celinta soo-saaraha. Haddii barnaamijka aan la heli karin, caawimaad ka heshid qandaraasleyda qashinka ee ruqsad haysta kuwaas oo ku xiri doona badeecada ama lagu aasi doono meel qashin-gareyn leh.
Lorcaserin ayaa ka soo jeeda Obeses
Dadka qaarkood waxay joogeen Belviq muddo lix bilood ah, laakiin waxay arki karaan isbedel weyn. Tusaale ahaan, user ayaa horeyba u lumiyay 20lbs kahor intaadan isticmaalin daawada sanadka oo dhan. Qiyaas ahaan, nus ka mid ah dadkani waxa ay lumiyeen xaddiga 10 bishii ugu horeysay.
In kasta oo ay dad badan badbaadiyeen, lorcaserin ayaa u muuqata mid aan waxtar u lahayn dadka laga tirada badan yahay. Halka ay qaadan doonto bisha oo dhan si ay u lumiso 3lbs kaliya, qaarkoodna ma diiwaangelinayaan natiijooyinka lorcaserin la dareemi karo. Taa beddelkeeda, kooxdan waxay dareemeen in rabitaankooda cuntada si aad ah u kordhay.
Dhibaatooyinka kale waa Diiditaan!
90%% kuwa dhameeya dhammaadka bisha marka la qaato lorcaserin waa dad dareemaya cabsi ka timid saameynaha. Isticmaalayaasha intooda badan uma dulqaadan doonaan hurdo la'aan, cabsi waalan, madax xanuun, xanaaq, madax-wareer, lallabo, iyo wadno-xummo joogto ah.
Inkasta oo dadka intooda badan ay la kulmaan astaamahan, dhowr isticmaalayaal ayaa qiray in dhibaatooyinka soo raaca ay ahaayeen kuwo gaaban. Celcelis ahaan, waxa kaliya oo la dareemi karaa labada todobaad ee hore ee qaadashada lorcaserin. Interesting ku filan, ku saabsan 2% macaamiisha ayaan la kulmin wax saameyn ah.
Laga soo bilaabo faallooyinka lorcaserin, 88% dadka isticmaala ayaa isku raacay in rabitaankooda cuntadu hoos u dhaco tan iyo markii ay bilaabeen isticmaalka lorcaserin. Waxay faa'iido u leedahay kuwa leh jahwareer qarsoon iyo kuwa dareenka leh. Haddii isbarbardhig lagu sameeyo inta u dhaxaysa qeybaha mid ka mid ah cuneen ka hor iyo waxa ay hadda cunayaan, farqiga u dhaxeeya badh ama ka yar. Dad tiro yar ayaa xitaa isku dayaya in ay wax cunaan sababtoo ah rabitaanka cunnada ayaa la waayi karaa maalmo.
Qaar ka mid ah shaqsiyaadka aan rabin inay cunto yaryar saameyn ku yeeshaan in miisaanka kale ee lumay ay u shaqeynayeen. Qaar ka mid ah, in lagu daro layliyo barnaamijkooda gaaban ayaa door weyn ka ciyaaray miisaanka halkii ay ku xiran tahay cuntada oo yaraata.
Bixinta 30-maalin waxay u socotaa bangiyada 330. Caymisyada qaar ma daboolayaan qiimaha iibsashada daawada. Xaaladaha noocaas ah, mid waxay ku xiran tahay xargaha bakhaarada iyo kaararka qiimaha gaarka ah ama aad u qoto dheer meelo jeebkooda. Marka nasiib kugu filan, waxaad bixin kartaa lacag yar sida $ 50.
Haddii aad ka sameysid wax ka yar $ 15,000 sanad, waxaad si fiican uga digtay jirkaaga inuu ka culus yahay. Qorshaha maareynta miisaan-khasaare waa hab sax ah oo loola jeedo koontadaada.
Lorcaserin ayaa kugula kicin kara adigoon is daba joogin labadii usbuuc ee aad ku soo bandhigtid nidaamkaaga. Kuwa joojiya qaadashada daawada waxay u badan tahay inay la kulmaan dhibaatooyinka soo raaca.
Lorcaserin waa unug kiimiko ah oo loo adeegsado tijaabooyinka bukaan socodka, isticmaalka daaweynta, iyo helitaanka daawooyinka cayil-ka-hortagga. Lorcaserin hydrochloride waxaa la sameeyaa marka lorcaserin uu ka soo horjeedo acid hydrochloric.
Maaddadan waxaa la siiyaa oo kaliya shaybaarada cilmi baarista. Maaha amaan bani'aadamka ama isticmaalka xayawaanka.
Lorcaserin waxaa laga heli karaa laba magacood oo kala duwan. Waxaad sidoo kale kartaa iibso lorcaserin HCL sida "Belviq®" ama "Belviq XR®". Maaddooyinka firfircoon ee labadaba waa lorcaserin hydrochloride.
Daroogada lumis miisaankani waa kiniin 10mg ah oo la qaato laba jeer maalintii. Waa qaab wareegsan, biconvex, midab buluug ah, midab buluug ah, iyo filim-daboolay 'A' oo dhinac ah iyo '10' oo ku yaal dhinaca dambe. Dhalada kasta waxay leedahay kiniinada 60.
Qaab Wareeg; Biconvex
Koodhka la taaban karo A; 10
Caddadka min dhalada Kiniinada 60
Waxyaabaha aan firfircooneyn
Qaybahaasi waxay si joogto ah dib loogu eegayaa si loo tirtiro maaddooyinka ka mas'uulka ah falcelinta xun iyo saameynta daawooyinka, gaar ahaan inta lagu jiro isdhexgalka daroogada.
Kani waa kaniinada dheeraadka ah ee 20mg la sii daayo kiniiniga hal mar maalintii. Si ka duwan Belviq®, sahaydani waxay keeneysaa kiniinno orange. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale ku wareegsan yihiin, biconvex, filimka la daboolay, oo lagu dhejiyay 'A' hal dhinac iyo '20' oo ku yaal dhinaca dambe. A dhalo ee Belviq XR® waxay leedahay kiniinada 30.
Koodhka la taaban karo A; 20
Caddadka min dhalada Kiniinada 30
Ferric oxide cas
Ferric oxide jaallaha
Hipomellose 2910 (15 MPA.S)
Iibso Lorcaserin HCL Online
1. Lorcaserin Kharashka
Lorcaserin HCL Qiimaha
Kharashka lorcaserin hydrochloride (846589-98-8) waxay kuxirantahay goobtaada, dukaanka aad ku iibsanayso, iyo tirada su'aalaha. Tusaale ahaan, milligram ka mid ah badeecada ayaa kaa qaadi doona inta ugu badan $ 50. Si kastaba ha noqotee, u socodka tiro badan ayaa laga yareeyn karaa qiimaha 1g halkii dollar ama wax ka yar.
Qalabka Belviq ee leh Xamuux (Belviq XR® wuxuu leeyahay kaniiniyada 60) wuxuu kuu siijiri doonaa bil ah waxayna u dhexeysaa $ 30 iyo $ 220. Qiimuhu wuxuu ku xiran yahay kiniiniga lorcaserin ee aad qaadan doonto tan iyo Belviq XR® kharashka dhowr doolar oo ka sareeya Belviq. Qaar ka mid ah shirkadaha caymiska ayaa dabooli kara qayb ka mid ah kharashka, sidaa darteed, adiga oo kugula bixinaya lacag macquul ah oo aad ku bixineyso. Ka sokow, waxaad ka heli kartaa kaararka gaarka ah iyo kaararka dhimista laga bilaabo Belviq, taasoo kaa dhigeysa inaad bixiso wax yar.
2. Sida Loo Helo Lorcaserin HCL
Xanuunka iibsiga Belviq waa sharciga sharciga ah ee FDA oo kaa doonaya inaad haysatid dhakhtar qora. Si kastaba ha ahaatee, iibsashada lorcaserin ma laha xaddidaad, marka laga reebo inaad tahay xirfad ku taal cilmiga cilmi baarista.
Dukaamada intooda badan waxay u baahan yihiin inaad iska diiwaangelisid xisaab, iyaga oo abuuraya boggaaga, oo fiiri qiimaha. Waxaad ku dari kartaa xajmigaaga gaarigaaga oodna dalban kartaa amar. Ma jiraan wax maraakiib maraakiib ah oo gaar ah tan iyo markii lorcaserin HCL ay ammaan tahay dhammaan noocyada gaadiidka.
Miyuu lorcaserin gacanta ku hayaa?
Inkastoo aan ahayn kicis, lorcaserin waxay u badan tahay inay keento ku tiirsanaanta daroogada iyo xadgudubka. Sababtan awgeed, Maamulka Daaweynta Daroogada (DEA) wuxuu ku qeexay Xeerka Muunadaha Xakamaynta ee Jadwalka IV.
Marka, sidee ayay u xakameynayaan qiyaasta daawada? Waan sharxi doonaa. Xaddiga xad dhaafka ah wuxuu noqon karaa shil, laakiin markaa waxa kale oo laga yaabaa inay tahay ujeedo ujeedo ah in la kiciyo isticmaalaha. Si loo keeno sanqadha, waxaad dhigi kartaa oo kaliya rijeetooyinka dawooyinka mudo kooban.
Qaar ka mid ah saameynta daawada lorcaserin waxaa ka mid ah muraayadaha, dareemidda 'sare', sedion, ama dabaal. Xaalado yar, bukaanno qaar ka mid ah oo joojiyay qaadashada ayaa soo bandhigay calaamado ka baxsan. Dhamaan arrimahan waa caddayn ku filan oo ah in daawadu ay sababi karto maskax ahaan.
Ma shaqeyn kartaa adiga oo qaadanaya lorcaserin?
Waxtarka lorcaserin wuxuu kaloo ku xiran yahay dhaqdhaqaaqa jireed iyo cunto yar-yar. Inta aad qaadanayso lorcaserin, jimicsi joogto ah waa inaad noqotaa qaab nololeedkaaga. Qayb ka mid ah kuwa isticmaalay waxay aaminsan yihiin in jimicsiga uu door weyn ka ciyaaray safarkooda miisaankooda halkii uu ku tiirsanaan lahaa oo kaliya iyadoo ku xiran dawada.
Miyuu lorcaserin leeyahay khatarta jirkaaga?
Inkasta oo qaar ka mid ah saameynada daawadu ay yar yihiin ayna u muuqdaan inay baaba'ayaan wiig ama laba wiig ka dib, kuwa kale waxay noqon karaan kuwo halis ah kuna noqdaan nolol khatar ah. Cilmi-baadhistu waxay muujineysaa in fal-celinta xun ee ay ka imanayaan ay dhici karto in ay dhacdo yar tahay. Sidaa darteed, way adag tahay in la qiyaaso soo noqnoqoshadooda.
Daraasada ugu weyn ee Maraykanka ma aysan kaliya soo deynin sheegashada khatarta wadnaha ee la xiriirta lorcaserin laakiin waxa kale oo ay la timid natiijooyin cusub. Halkan waxaa ku qoran aragti guud ee khatarta lorcaserin;
Tani waxay ku saabsan tahay markaad qaadato Belviq oo ay weheliso daawooyinka, kuwaas oo kor u qaada ama hirgeliya xayawaanka serotonin. Daawooyinkaan waxaa ka mid ah kuwa daaweeya murugada, dhibaatooyinka maskaxda, madax xanuun, iyo hargab caadi ah.
Fikradaha isdaba jooga ah
Sonkorta dhiigga oo hoos u dhacda waxay ku dhacdaa dadka qaba cudurka macaanka nooca II. Waxaad halis gelin kartaa noloshaada haddii aad ku guuldareysato inaad la socoto heerka sonkorta oo aad u habeyso dawada sonkorowgaaga.
Cudurka Wadnaha ee Valvular
Kiniiniyada Lorcaserin waxay sababi karaan dhaawacyada wadnaha oo ay sabab u tahay dhaqdhaqaaqa 5-HT2B soo dhaweeyayaasha. Si kastaba ha noqotee, saameyntan ayaa leh hoos u dhac sababtoo ah daroogadu waxay leedahay xajin sare oo loogu talagalay 5-HT2C marka loo eego kuwa kale ee 5-HT. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in boqolkiiba dadka qaadaya lorcaserin iyo kooxda ku yaala placebo ay muujin doonaan farqi weyn marka la baaro cudurada wadnaha ee wadnaha.
Kani waa kacsan xanuun oo socon doona in ka badan afar saacadood. Haddii aan la daweyn, waxay u horseedi kartaa mid joogto ah unugyada.
Miisaanka intee le'eg ayaan lumin doonaa lorcaserin?
Haddii aad ku dareyso waxqabadyo jireed iyo cunto caafimaad leh hab nololeedkaaga, waxaad u badan tahay inaad lumiso miisaan badan. Toddobaadkii 12, waa inaad lumisaa ugu yaraan 5% miisaanka jidhkaaga. Marka tani aysan dhicin, ma jirto wax rajo ah ee Belviq kaaga shaqeynaya.
Marka laga eego dib u eegista lorcaserin, waxaa dhici karta in dadka intooda badan ay soo sheegaan in ay lumiyeen 10 - 15lbs bilaha kowaad.
Miyaad tijaabisay Belviq ama xakameyn ra'yigeed oo la mid ah, oo ay shaqeysay?
90% ee markhaatiga isticmaalku waxay cadeynayaan in lorcaserin uu shaqeeyo. Ilaa inteeda badan, daawada ayaa laga yaabaa in ay sababtay waxyeello aan fiicneyn ama aysan waxtar lahayn. Xaaladaha noocaas ah, dhakhtarku wuxuu joojin doonaa qiyaasta daawadaada wuxuuna kuu qori doonaa daroogo kale oo miisaanka lumay.
Haddii hal gacan-qabe cunno-qabe ahi uu ku fashilmo inuu ku shaqeeyo, waxaa jira fursado kale oo farmasiga kugula talin karo. Sida hadda, FDA waxay ogolaatay fentminiinka (Qsymia), orlistat, naltrexone (contrative), iyo liraglutide.
Soo koobida Lorcaserin HCL (Belviq)
Daroogada lumis miisaanka ee Lorcaserin ayaa loogu talagalay bukaanka cayilan iyo kuwa cayilan, gaar ahaan kuwa qaba cudurrada miisaanka ku xiran. Daawada waxay leedahay khataro halis ah oo halis ah iyo saameyn xun oo jidhka ah laakiin markaad raacdo talada dhakhtarka, waxaad noqon doontaa dhinaca ammaanka.
Lorcaserin wuxuu u baahan yahay in aad sii wadato isticmaalka noloshaada oo dhan ama sida daawada loo qoray. Haddii aad naftaada isku nasiso ka dib sanad ka mid ah inaad lumiso 20lbs, u diyaari inaad hesho qiimo la mid ah miisaanyo dheeraad ah.
Inkasta oo aad qaali u tahay, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho kaydka, rasiidhka, iyo kaararka dhimista ee laga helo bogga Belviq. The qiimaha lorcaserin ayaa sidoo kale hoos u dhigi doona haddii caymiskaagu daboolayo qayb ka mid ah eedeymaha. Waxaa lagugula talinayaa inaad miisaamiso khatarta ku lug leh iyo faa'iidooyinka caafimaadka kahor intaadan kharashka ku qorin $ 300 bishiiba.
Bohula, Erin A., Wiviott, Stephen D., McGuire, Darren K., Inzucchi, Silvio E., et al .: Ammaanka Wadnaha ee Lorcaserin ee Dadka Bukaanka ah ama Bukaanka, Wargeyska New England Journal of Medicine, 2018
Maamulka Cuntada iyo Maandooriyeyaasha, Daawooyinka Targetka Xakamaynta Culayska Muddada-dheer, Online, La daabacay 17 July 2012
Ashley Gustafson, Cammile King, Jose AR, Xarunta Qaranka ee Macluumaadka Biotechnology, Maqaalada PMC, MediMedia, USA Lorcaserin (Belviq), Online, September 2013